Tag: b2b kutengesa | Martech Zone
Tag: b2b kutengesa
Marketo Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva
Muvhuro, October 10, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Guy Goldstein
Marketo akaburitsa yayo Akaundi Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) module sechikamu chekuwedzera kwekuedza kutsigira zvirinani hukama hwebhizinesi. Nepo chishandiso pachacho chiri chekutanga vhezheni uye ichiratidza yakawanda yevimbiso, pane dzimwe nzira idzo ABM yakagadziriswa kushandura mabhizinesi anotanga kushandisa chikuva. Marketo inotsanangura zvinhu zvitatu zvakasarudzika zvemhinduro yayo yeABM: Iko kugona kunongedza uye kubata maakaunzi uye zvinyorwa zveakaundi. Iko kugona kwekuita tarisiro
MonsterConnect: Bhadhara Chikwata Chako Chekutengesa Kuvhara, Kwete Kufona
China, July 2, 2015 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Sezvo takashanda kumakambani mazhinji eSawaS ane zvikwata zvekutengesa zvinobuda, zvakave pachena kuti kukura kwekambani kwainyanya kuvimba nekugona kwedu vamiriri vedu vekutengesa kuvhara bhizinesi idzva. Hazvina kushamisika zvachose, zvakare, kuti pakanga paine kuwirirana kwakazara pakati pevatengesi repanobuda nhare yevhoriyamu uye yavo yakavharwa yekutengesa mwero. Kana izvo zvichikupa iwe mufananidzo wepfungwa wevamwe vekutengesa rep vachitaura kune tarisiro yega makumi matatu
Kukwira Kwekutengesa Kwemukati mu2015
Chipiri, June 9, 2015 Chipiri, June 9, 2015 Jenn Lisak Golding
Zvinoenderana neSirius Sarudzo, 67% yerwendo rwemutengi ikozvino yaitwa manhamba. Izvi zvinoreva kuti chingangoita 70% yesarudzo yekutenga inoitwa pamberi pekutarisira kunyange kutanga nhaurirano ine musoro nekutengesa. Kana usiri kupa kukosha pamberi pekutanga kudyidzana ne rep, saka ungangove usingave unokwikwidza kune wako wekuda rudo. Sezvo isu tese tichiziva, mukati mekutengesa kwave kuchikura kwemakore mashoma apfuura, uye